09/01/2018 - Page 3 sur 3 -
Mpanakanto sy ny fitiavana : Ny mozika no nampitambatra an-dry Willy sy Nina’s, Big Mj sy Arnaah, ary Shyn sy Deenyz.
09/01/2018 admintriatra 0
Maro ary saika mitombo isan’andro ny mpanakanto eo amin’ny sehatry ny mozika eto amintsika. Toa ny olona rehetra, dia manana ny fiainam-pitiavany ihany koa izy ireny. Misongadina kosa anefa, ary hifantohan’ny fanadihadiana amin’ity lahatsoratra ity, …Tohiny
Azo atao tsara mihitsy rehefa atao ny kajikajy tsotsotra ny mipetraka any Antsirabe na Ambositra kanefa miasa eto an-drenivohitra. Ora telo eo ho eo mantsy no lany mampitohy an’Ambositra sy Antananarivo ary ora roa kosa …Tohiny